လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်မှ လုပ်ငန်းတာဝန်များပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ( ၆ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၆ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သံအမတ်ကြီးအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့်အချိန်တွင် လာရောက် တွေ့ဆုံခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်နိုင်မည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စများတွင် ရလဒ်ကောင်းများထွက်ရှိခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်မိပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေး စင်္ကြန် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ Master Plan ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်သည့်အတွက် အတော်အသင့် အခြေခိုင်နေပြီဖြစ်ရာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေးမှာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့လာပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။
ထို့နောက် သံအမတ်ကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မိမိတာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် (၃) နှစ်တာ ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ(၂)ရပ်အကြား လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဘက်ဘက်မှပံ့ပိုးကူညီခဲ့မှုများအတွက် ကျေးဇူးတင် ပါကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင်လည်း တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမို မြှင့်တင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြန် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်စီမံကိန်းများကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍများ၊ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ရေနံ နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍများတွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး မိမိတတ်အား သရွေ့ အားပေးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။